မည်သည့်အရာကို infertility ဟု ဆိုသနည်း
တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မျှ တစ်နှစ်ကာအောင် သန္ဓေတားနည်းလမ်းများ မသုံးဘဲ သံဝါသမှုပြုသော်လည်း ကလေးမရနိုင်သော ဇနီးမောင်နှံများကို infertility (ကလေးမရနိုင်မှု) ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကလေးမရစေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများမှာ အမျိုးသမီးထံမှသော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားထံမှသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဦးလုံးထံမှသော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် အသက်အရွယ်၊ မျိုးဥလမ်းကြောင်း ပိတ်ခြင်း၊ မျိုးဥမကပ်ခြင်း၊ polycystic ovarian syndrome ခေါ် ဟိုမုန်းပြဿနာတို့ကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများ ရှိနေနိုင်သည်။ အမျိုးသားဘက်ကဆိုလျှင် အဖမျိုးစေ့အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ (ကနဦးတါင် ကလေးမရနိုင်ခြင်းအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သိရှိရန်အတွက် ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုပါသည်။ ဆရာဝန်အနေဖြင့် အသင့်လျော်ဆုံးသော ကုသရေးနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ကာ ထိုသို့ ပြုလုပ်ပြီး ခြောက်လအကြာတွင် ကိုယ်ဝန်မရပါက ကလေးမရနိုင်ခြင်းဖြစ်နေသည်ဟု ဆရာဝန်က သတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်)
Infertility မှာ အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်နည်းပြီး အမျိုးသမီးများတွင် အတွေ့ရများသည်ဆိုတာ မှန်ပါသလား။
ကလေးရခြင်းဆိုသည်မှာ သ‌ဘာဝဖြစ်စဥ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဟု ထင်တတ်ကြပါသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ်တွင်တော့ ကလေးမရစေသည့် အကြောင်းရင်းများတွင်လည်း အမျိုးသားများထံမှလည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားများ ကလေးမရနိုင်ခြင်းမှာ ဇနီးမောင်နှံများတွင် ကလေးမရနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသားများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကလေးမရနိုင်ခြင်းအတွက် ကုထုံးနည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ မျိုးဥကြွေမည့်‌ရက်ကို ခန့်မှန်းကာ ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် အဖမျိုးစေ့ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခြားသေား နည်လမ်းများတွင် Gamete IntraFalloprian Transfer (GIFT), ICSI, IVF သို့မဟုတ် သန္ဓေသားလောင်းကို ငါးရက်တာ အပြင်တွင် ပျိုးထောင်ကာ သားအိမ်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကုသမှုမှာ ဇနီးမောင်နှံတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကလေးမရနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းအပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မျိုးဥလမ်းကြောင်း ပိတ်နေသော အမျိုးသမီးများဆိုလျှင် အဖမျိုးစေ့ထည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်း သို့မဟုတ် GIFT နည်းလမ်းကို သုံးမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုအစား ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းလမ်း သို့မဟုတ် Blastocyst Culture နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူနာများ၏ ကလေးရရှိရန် အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာ လူနာ၏ အသက်၊ ကလေးမရနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်း၊ ကလေးမရနိုင်ခြင်းကို ကုသသည့် နည်းလမ်းကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများအပေါ် မူတည်ကာ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အမျိုးသမီးများသည် ငယ်ရွယ်သော အမျိုးသမီးများနှင့် ယှဥ်လျှင် အမမျိုးဥ ထုတ်လုပ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ရာ၌ အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် အဖမျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသော အမျိုးသားများဆိုလျှင် ICSI ကုထုံးကို ပုိမို သင့်လျော်မည်ဖြစ်သည်။
Children born from treatment haveahigher chance of abnormalities than natural methods?
The chances of success of each patient are different. Depending on factors such as the age of the woman, causes of infertility, and methods of treatment such as if the woman is already old Stimulating eggs is harder than younger women. Or if very little sperm then helps to fertilization with the Taxi The chance of success will be higher.
အမျိုးသမီးက အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီး အိမ်ထောင်လည်း မရှိသေး။ သို့‌ဆိုလျှင် အမျိုးဥများ ထုတ်ယူ အေးခဲထားရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
လက်ရှိတွင် နည်းပညာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမိမျိုးဥ၊ အဖမျိုးစေ၊ သန္ဓေသားလောင်းတို့ကို အေးခဲကာ ဆယ်‌နှစ်ကျော်အထိ သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အမိမျိုးဥ အေးခဲခြင်းတွင် မျိုးဥအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်အောင် မျိုးဥအိမ်အား လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ ထို့နောက် မျိုးဥအိမ်မှ မျိုးဥများကို ထုတ်ယူကာ အပူချိန် သုညဒီဂရီအောက်တွင် အေးခဲထားခြင်းများပါဝင်သည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါ အေးခဲထားသော မျိုးဥများကို အရည်ဖျော်ကာ အဖမျိုးစေ့နှင့် ပေါင်းစပ်လျက် သန္ဓေသားဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့နောက် သန္ဓေသားကို အမိဝမ်းထဲသို့ ပြန်ထည့်ပေးပါသည်။ ကလေးမရခြင်းကို ကုသသည့် ကုထုံးနည်းတူ သန္ဓေသားအများအပြားရှိနေသော လူနာများတွင်လည်း သန္ဓေသားလောင်း တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကိုသာ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ ထို့နောက်ကျန်ရှိနေသေးသော သန္ဓေသားလောင်းများကို အေးခဲသိုလှောင်ထားပေးပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရပြီး ကလေးမီးဖွားပြီးသည့်အ‌ခါတွင် နောက်တစ်ခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သန္ဓေသားလောင်းများကို အေးခဲရာမှာ ပြန်လည် အရည်ဖျော်ကာ မိခင်ထံ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
ပုံမှန် ဓမ္မတာမဆင်းသော အမျိုးသမီးများအတွက် မျိုးဥကြွေခြင်းကို မည်သို့ ခန့်မှန်းမည်နည်း။
ဓမ္မတာမမှန်သော အမျိုးသမီးများအတွက်ဆိုလျှင် ဟိုမုန်းလယ်ဗယ်ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် တင်ပါးဆုံနှင့် မွေး‌လမ်းကြောင်း အာထရာဆောင်းရိုက်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းက မျိုးဥကြွေချိန်ကို အတိအကျ တွက်ချက်၍ ရစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မ၏ ဓမ္မတာစက်ဝန်းက မည့်သည့်အချိန်တွင် စသနည်း။
ဓမ္မတာစက်ဝန်းမှာ ပထမဆုံး ဓမ္မတာဆင်းသည့် ရက်တွင်စတင်ပါသည်။
မျိုးဥကြွေခြင်းကို ခန့်မှန်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းရှိပါသလား။
မျိုးဥကြွေချိန်ကို ခန့်မှန်းခြင်းမှာ ဓမ္မတာပုံမှန်လာသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ မျိုးဥကြွေချိန်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် ဓမ္မတာမလာမီ ၁၄ ရက်မှ ၁၆ ရက်နေ့အတွင်း ကြွေပါသည်။
PCOS ဆိုတာကဘာလဲ။ ကလေးမရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်လား။
Polycystic ovary syndrome (PCOS) ဆိုသည်မှာ မျိုးဥအိမ်များစွာဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပြဿနာဖြစ်ပါပြီး endocrine ပြဿနာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးရနိုင်သည့်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီး ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ထိုပြဿနာကို ကြုံနေရပါသည်။ ထို့အပြင် ကလေးမရနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ ထဲမှ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လူနာအများစုတွင် ဓမ္မတာပုံမမှန်ခြင်း၊ မျိုးဥဟိုမုန်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် androgen ဟိုမုန်များ များပြားလွန်းနေသည့် လက္ခဏာကို တွေ့ရပါသည်။ PCOS ကြုံတွေ့နေရသော အမျိုးသမီးများမှာ မျိုးဥမကြွေခြင်းပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ထိုပြဿနာမှာ ကလေးမရနိုင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ PCOS ကို ကုသသည့် ကုထုံးမှာ ရောဂါလက္ခဏာများကို လျှော့ချကာ ကလေးရရှိနိုင်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အကယ်၍ မျိုးဥလမ်းကြောင်းနှစ်ခု ပိတ်နေသည်ဆိုလျှင် ကလေးရနိုင်ပါသလား။
ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းလမ်းဖြင့် ကုသခြင်းဖြင့် ကလေးရနိုင်ပါသည်။
အငှား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ပါသလား။
ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသမီးက သားအိမ်ထုတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် သားအိမ် ပြဿနာရှိခြင်းကဲ့သို့သော ကလေးမရနိုင်သည့် အနေအထားကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရလျှင် အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း လုပ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ငွေကြေးဖြင့် လုပ်ဆောင်သော အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုထား‌ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရလိုသည့် ဇနီးမောင်နှံနှင့် အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးမည့် အမျိုးသမီးတို့ ဆွေးမျိုး တော်စပ်မှ လုပ်ဆောင်၍ ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်မရစေ့နိုင်သည့် အကြောင်းတွေက ဘာလဲ။
အတွေ့ရများသော အကြောင်းတစ်ခုမှာ အများအပြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမွှာကိုယ်ဝန်များ ဆေးပညာအရ ပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူထားပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတော့ ရက်မပြည့်ဘဲ မီးဖွားခြင်းကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသည့် အနေအထားများ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (သုံးမွှာပြူး၊ လေးမွှာပြူး သို့မဟုတ် ထိုထက်များပြားသော ) အများအပြားကိုယ်ဝန်ရခြင်းများက အဆိုပါ အန္တရာယ်ကို မြင့်မားစေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် သန္ဓေသားလောင်းကို အမိဝမ်းအတွင်း ပြန်ထည့်ပေးရာတွင် အများဆုံး သန္ဓေသားလောင်း တစ်ခုမှ နှစ်ခုအထိသာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော သန္ဓေသားလောင်းများကိုသော နောင်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အေးခဲသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခင်ပွန်းသည်‌က ကလေးမရနိုင်ဖြစ်နေသည်။ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
အမျိုးသားများကြောင့် ကလေးမရနိုင်ခြင်းမှာ သုတ်လွှတ်မှုအတွင်း အဖမျိုးစေ့များ မပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကို စစ်ဆေးရန် လိုပါသည်။ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) ဖြင့် အဖမျိုးစေ့များ ထည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်းမှာ ဆေးပညာဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သားအိမ် အမြှေးအုပ်ခြင်း (endometriosis) သို့မဟုတ် သားအိမ်အတွင်း အကျိတ်တည်ခြင်း (chocolate cyst) က ကလေးမရနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသလား။
Endometriosis ဆိုသည်မှာ မျိုးဥလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် သားဥအိမ်ဝန်းကျင်တွင် သားအိမ်အမြှေးတစ်ရှူးများ ဖုံးလွှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုးရွားသော အခြေအနေများတွင် အဆိုပါ အမြှေးများက အကျိတ်တည်ခြင်းကို ဖြစ်စေကာ ကလေးမရနိုင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ကာ ကုထုံးများစွာရှိပါသည်။ အချို့ အဖြစ်အပျက်များတွင် ခွဲစိတ်အကျိတ်ဖယ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် အခြားနည်းပညာ အကူအညီမယူဘဲ ကိုယ်ဝန်ရလာသည်များလည်းရှိပါသည်။
IVF၏ အောင်မြင်နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
IVF ကို အောင်မြင်စေသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်။
အဖမျိုးစေ့နှင့် မျိုးဥတို့၏ အရည်‌အသွေး
အဆင့်မြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အဆင့်မြင့် ကိရိယာများ။
သန္ဓေသားလောင်းများကို ကိုင်တွယ်သူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အထူးကျွမ်ကျင်မှုများ လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သန္ဓေသားလောင်းကို အမိဝမ်းအတွင်း ပြန်ထည့်ပေးရာတွင် သန္ဓေသားလောင်း ရှင်သန်နိုင်မှုက ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
သန္ဓေသားလောင်း၏ အရည်အသွေး ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရတော့ အောင်မြင်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ သို့သော် သ‌န္ဓေသားလောင်းကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း အထူးသဖြင့် အသက် ၄၀ ထက် အမျိုးသမီးများတွင် ကလေးပျက်ကျနိုင်ချေများလည်း ရှိနေပါသည်။
IVF နည်းလမ်းက မည်သူများနှင့် သင့်လျော်သလဲ။
IVF နည်းလမ်းမှာ အောက်ပါလူနာများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
မျိုးဥလမ်းကြောင်း ပိတ်နေသော သို့မဟုတ် မျိုးဥလမ်းကြောင်း ဖယ်ရှားထားသော် အမျိုးသမီးများ။ ထိုအနေအထားကြောင့် အမမျိုးဥနှင့် အဖမျိုးစေ့တို့ တွေ့ဆုံ သန္ဓေအောင်ခြင်းကို တားဆီးနေသည်။
မကျန်းမာသော အဖမျိုးစေ့ သို့မဟုတ် အရေအတွက်နည်းသော အဖမျိုးစေ့ရှိနေသည့် အမျိုးသားများ
အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ သုံးနှစ်ကျော်အထိ ကလေးမရနိုင်သည့် ဇနီးမောင်နှံများ
IUI နည်းလမ်းဖြင့် ကလေးရရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်သော ဇနီးမောင်နှံများ
သန္ဓေသားလောင်းကို သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးနောက် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
Following the embryo transfer to the uterus, the physician will recommend 12-24 hours of rest. Avoid intense exercise or activity, as well as sexual intercourse foraperiod of time. Most importantly, avoid taking other medications other than those prescribed by the physician, as some medications may interfere with the embryo transfer. Furthermore, selectively choose healthy food, relax and avoid stress.
BDMS Wellness Clinic ရှိ Fertility Clinic မှ ဆရာဝန်ကြီးများက ဘယ်သူတွေလဲ။
Poonsak Waikwamdee, M.D. နှင့် Sorapop Kiatpongsan, M.D. တို့မှာ Fertility Clinic ရှိ ကိုယ်ဝန်ရရှိရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အတွက် အဆင်ပြေသော ရက်နှင့် အချိန်ကို ချိန်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးရန် ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှု ပြုလုပ်လိပါသည်။
ဝက်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ကြိုတင်ချိန်းဆိုရန်အတွက် သင်အဆင်ပြေသော နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို ပြောပြပေးပါ။ Website | E-Mail: bwc.ivf@bdmswellness.com |02826 9971
Fertility Clinic အတွက် ပရိုမိုးရှင်းရှိသလား။
Fertility Clinic အတွက် ပရိုမိုးရှင်းကို စစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ် ဖေ့စ်ဘုတ်ရှိ BDMS Wellness Clinic (https://www.facebook.com/BDMSWellnessClinic/) ကို follow လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်02826 9971 ကို ခေါ်ဆိုကာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများမှာ သင့်ကို ဝမ်းမြောက်စွာ အကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။